Chekwaa shark anyị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Chekwaa shark anyị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Akụkọ na -emegharị na Thailand
na-aga n'ihu na-aga n'ihu na usoro nchekwa mmiri site na mmalite nke mmekorita ọhụrụ dị mkpa na Phuket Marine Biological Center (PMBC) iji mụọ, lekọta na ịhapụ shark bamboo na ndịda Thailand.
Dirk De Cuyper, onye isi oche nke S Hotels & Resorts, kwuru, sị: “Anyị nwere obi ụtọ isonyere Phuket Marine Biological Center n'ọrụ a dị oke egwu. International Union for Conservation of Nature (IUCN) ekewa shark bamboo dị ka 'adịghị ike', yabụ mmemme SOS ga-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ichekwa ụdị isi okwu. Nke a bụ akụkụ nke nkwa ụlọ ọrụ anyị kwere na mbara ala, nke na-eduzi nkwado anyị maka ebumnuche mmepe mmepe nke United Nations (SDGs), ọkachasị SDG14, 'Life Under Water', nke na-elekwasị anya na oke osimiri, oke osimiri na osimiri ụwa.
"Ụlọ ọrụ nchọpụta mmiri anyị dị na SAii Phi Phi Island Village na SAii Lagoon Maldives na-ekere òkè dị mkpa n'ichekwa ihe ndị dị n'okpuru mmiri ha na nchebe nke anụ ọhịa. Ndị ọkachamara n'ihe banyere mmiri mmiri bi na-edu ha, ha na-akụziri ndị ọbịa anyị na ndị bi n'ime obodo anyị mkpa nchekwa dị. Anyị na-atụ anya iso ndị enyi anyị na ndị ọrụ ibe anyị na PMBC na-arụkọ ọrụ iji chekwaa bamboo shark ndịda Thailand, "Mazị De Cuyper kwukwara.
Dr. Kongkiat Kittiwatanawong, onye isi ụlọ ọrụ Phuket Marine Biological Centre, kwuru, sị: “Ebe anyị tụkwasịrị obi na ikike na nka nke Singha Estate n'ihe gbasara nchekwa ndụ mmiri na-atụle ahụmahụ ụlọ ọrụ ahụ site na ọrụ ndị gara aga. E wezụga nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ejirila ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị mmiri na ndị ọrụ na Marine Discovery Center, bụ ndị nwere ikike ilekọta akwa shark bamboo ruo mgbe ha ghọrọ ụmụaka "
S Hotels & Resorts na Singha Estate emekọla ọnụ n'ọtụtụ mkpọsa nchekwa mmiri na-aga nke ọma. Ihe omume "Phi Phi na-agbanwe agbanwe" na-achọ iji dozie okwu nke ịcha ọcha coral, ebe "Toh Wai Wai" na-enyere aka ịhapụ clownfish, gbasaa coral na osisi mangrove na Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park. Na mgbakwunye, mmekorita ọhụrụ ya na Mahadum Kasetsart na-eji drones nyochaa na foto coral reefs na mpaghara ahụ. N'afọ gara aga, ụlọ ọrụ nchọpụta mmiri dị na SAii Phi Phi Island Village napụtara ma mezigharịa shark bamboo na azụ ọdụm merụrụ ahụ.
Na Maldives, mbọ ịgbasa coral sitere na ndị otu Marine Discovery Center na SAii Lagoon Maldives butere mmụba okpukpu iri nke akuku mmiri, yana nlọghachi nke nduru oké osimiri hawksbill, shark hammerhead na-akpụ akpụ na azụ azụ na-egbu egbu na mpaghara ahụ. A hụkwara mbe n'oké osimiri Olive Ridley dị ime ka ọ nọ n'akụkụ osimiri n'afọ 2020 - ọhụụ edekọ mbụ nke ụdị akwụ a na Maldives.
S Hotels & Resorts agbaala mbọ na-ekpochapụ plastic eji otu eme ihe, ibelata ihe mkpofu, imegharị mmiri na ịkwado ojiji nke ngwaahịa na-adigide na ihe na-emebi emebi. Site na ọtụtụ atụmatụ na-aga n'ihu, ọ bụghị ihe ijuanya na otu ahụ enwetala ọtụtụ ihe nrite, gụnyere aha "Green Leadership" na Asia Responsible Enterprise Awards 2020. SAii Phi Phi Island Village bụ onye mmeri nke "Marine & Nature" na ndị njem nlegharị anya. nke Thailand (TAT) UK maka ọrụ Thailand Awards 2020, ebe Santiburi Koh Samui nwetara onyinye onyinye Green Hotel 2020 - 2021 "Ọkwa ọla edo" - naanị ebe ezumike na Samui iji nweta ọkwa a n'ime ihe karịrị 100 akụrụngwa etinyere.